နမူနာပေးသော ကျောင်းဝတ်စုံနှင့် အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးသော ဝတ်စုံတို့၏ အရည်အသွေး ကွာခြားမှု ရှိနေ? - Yangon Media Group
နမူနာပေးသော ကျောင်းဝတ်စုံနှင့် အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးသော ဝတ်စုံတို့၏ အရည်အသွေး ကွာခြားမှု ရှိနေ?
အောင်လံ၊ မေ ၃၁
အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခမဲ့ထုတ်ပေးသောကျောင်း ဝတ်စုံများ၏ အရည်အသွေးမှာ နမူနာပေးသောဝတ်စုံနှင့် အမှန်တကယ်ထုတ်ပေးသောဝတ်စုံတို့၏ အရည်အသွေးမှာကွာခြားမှုရှိ နေသည့်အတွက် ပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။
”တင်ဒါရတဲ့ကုမ္ပဏီက ကျောင်းဝတ်စုံတွေမဖြန့်ခင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ နမူနာဝတ်စုံတွေ မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဆီကိုပေးထားပါတယ်။ အမှန်တကယ်အောက်ခြေမှာဖြန့်တဲ့ ဝတ်စုံတွေကနမူနာဝတ်စုံတွေလောက် အရည်အသွေးမကောင်းဘူးလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောကြားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကျကျပညာရှင်တွေ နဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါမယ်။ အရည်အသွေးမမီဘူးလို့ ပေါ်ပေါက် ရင်တော့စာချုပ်ပါစည်းကမ်းအတိုင်းပဲလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ”ဟု တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်အေးက ပြောကြားသည်။
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့ နယ်များမှ အခြေခံပညာမူလတန်း အဆင့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုကျောင်းဝတ်စုံတစ်စုံနှင့် ဗလာစာအုပ်ခြောက်အုပ်စီအခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အချို့မြို့နယ်များ၌ ကျောင်းဝတ်စုံအရည်အသွေးများမှာ သတ်မှတ်နမူနာအတိုင်းမဟုတ်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရထံတင်ပြမှုများရှိကြောင်း သိရသည်။
”နမူနာပေးပို့တဲ့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ တကယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဝတ်စုံ တွေကျတော့အရည်အသွေးကွာ ခြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ချုပ်ရိုးချုပ်သားနဲ့ အဝတ်စအရည်အသွေး တွေကကွာနေပါတယ်။ အဲဒါကိုတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးဝန်ကြီးထံကိုတင်ပြမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်”ဟု ကံမမြို့နယ်တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းကပြောကြားသည်။
မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ကျောင်းဝတ်စုံနမူ နာများပေးပို့ခဲ့ရာ နမူနာပေးပို့သည့် ကျောင်းဝတ်စုံများနှင့် ကျောင်းများသို့ရောက်ရှိလာသည့် ကျောင်းဝတ်စုံများနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရာမှ မြို့နယ်အချို့တွင်ရောက်ရှိလာသည့် ဝတ်စုံများမှာ နမူနာပေးထား သောကျောင်းဝတ်စုံများထက်အရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုများရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”ကလေးများအတွက် အခမဲ့ ပေးဝေမည့် ဗလာစာအုပ်များ ကျောင်းဝတ်စုံများကိုစိစစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အရည်အသွေးကွာခြားချက်မဆိုးကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်” ဟု အောင်လံမြို့နယ်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးကျော်ကပြောကြားသည်။
မိုးရွာသွန်းမှု များပြားပြီး ပြိုကျ ပျက်စီးသွားသည့် မြေထိန်းနံရံကို ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တပ်မေ?
ကျောက်မီးသွေးသုံး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၂ဝ၃၈ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီ အဆုံးသတ်တော့မည်
ရှီကျင့်ဖျင်ပြင်သစ်သို့ရောက်စဉ် အဲလ်ဘတ်စ်ဂျက်လေယာဉ်အစင်း ၃ဝဝ မှာယူ
ဘယ်နိုင်ငံတွေကို အမေရိကန်ရဲ့ မိတ်ဆွေအဖြစ် စဉ်းစားနိုင်မှာလဲ